Radio Devdaha बाबुआमालाई घर निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजाय !
२८ कात्तिक, काठमाडौं । के तपाईंले आफ्ना वृद्ध आमा–बाबुलाई हेला गरेर दुःख दिनुभएको छ ? यदि आफ्ना बुबा–आमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने, सडकपेटीमै बेवारिस अवस्थामा छाड्ने गर्नुभएको छ भने सावधान, यस्तो हर्कतले तपाईंलाई जेलसम्म पुर्याउन सक्छ ।
बाबुआमालाई हेला गर्ने, दुःख दिने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ ।